सरसफाई दुत नियुक्त हुनुभएको छ, अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ? (अन्र्तवार्ताश्रोत: एभेरेष्टटाईम्स अनलाईन)
हाम्रो कलालाई सम्मान गरेर सरकारले यो जिम्मेवारी हामीलाई सुम्पेको छ । हामी एकदमै खुसी छौं । सरकारको एक घर, एक चर्पी अभियानलाई सफल पार्न पनि हामीलाई सरकारले यो जिम्मेवारी दिएको हो । अब हामी मेरी बास्सै, स्टेज कार्यक्रमदेखि विभिन्न शो मार्फत र विभिन्न सरसफाइ कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नेछौ ।
यो जिम्मेवारीलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
यो सिंगो कला जगतको सम्मान भएको हाम्रो ठहर छ । कलाकारको माध्यमबाटै चेतना फैलाउन सकिन्छ भनेर सरकारले यो क्षेत्रलाई सम्मान गरेको हामीले बुझेका छौ ।
कसरी यस्तो जिम्मेवारीमा छानिएको होला जस्तो लाग्छ ?
हामीले तीन वर्ष अघि बनेको 'चर्पी बिहे' नामक छोटो फिल्ममा अभिनय गरेका थियौ । केदार घिमिरे 'माग्ने बुढा' सुन्तली र म आफैले निर्देशन गरेको यो फिल्म जिल्लाजिल्लामा देखाइयो । यही फिल्मको माध्यमबाट मानिसहरुले चर्पी बनाएको भन्ने खबर सुनियो पनि । यसको कथा नै चर्पी हुनेको इज्जत छ भन्ने खालको थियो । यही फिल्मको आधारमा छानिएको हो कि जस्तो हामीलाई लागेको छ ।
सीताराम जी मेरी बास्सैमा 'संस्कार गुरु' भनेर पनि चिनिनु हुन्छ, यसको प्रभाव त हैन ?
मेरी बास्सै बिल्कुलै व्यवसायिक भएको हुनाले यहाँ अलि उट्याङपट्याङ कामहरु हुन्छन् । संस्कार गुरु पनि यस्तै एउटा पात्रको रुप हो । सरकार प्रभावित भएको मुख्य चाहि चर्पी बिहेबाट नै होला ।
सरकारले यस्तो अवसर दिएको छ, तपाईहरुलाई घाटा होला कि फाइदा ?
घाटाको त कुरै छैन । यसले अझै राम्रा राम्रा सिर्जना गर्ने अवसर मिल्नेछ ।